နိုင်ငံတကာရေးရာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 26
မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၆၊ မေ ၂၁၊ ၂၀၁၂ ယမန်နေ့ ကယ်လီဖိုးနီးယား စံတော်ချိန်၊ ညနေ ၆း၃၀ က ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ အယ်လ်အေမြို့တော်က ပရိသတ်တို့အတွက် အထင်ရှားဆုံး နေကြပ်မှုကို ရှုစားနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည် ကယ်လီဖု်ိးနီးယားနဲ့ ဂျပန်ပြည်တို့မှာ ဒီနှစ်အတွက် ထင်ရှားနီးကပ်တဲ့ နေကြပ်မှုကို တွေ့ကြရတာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားသူ အများအပြားက ပြင်ပနဲ့ တောင်ကုန်း မြေမြင့်တို့ထံ ခရီးထွက် စုဝေးပြီး နေကြပ်တာကို ကြည့်ရှုကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Griffith Observatory ဆိုတဲ့ တောင်ပေါ်အာကာသကြည့်စခန်းမှာ လူ ၃ ထောင်စုဝေးပြီး နေကြပ်ခြင်းကို စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြတယ် လို့သိရပါတယ်။ နေကြပ်တာ ထင်ထင်ရှားရှား အားဖြင့် နာရီဝက်ခန့် ကြာမြင့်အောင် စောင့်ကြည့်နိုင်ပြီး လော့စ်အိန်ဂျလိစ်အတွက်တော့ နောင် ၅၉ နှစ်မှာ...
ဦးကျော်သူနှင့် ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်တို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ ရောက်ရှိ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၊ မေ ၂၊ ၂၀၁၂ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်း၏ ဖိတ်ကြားချက်ဖြင့် ပြည်ပသို့ထွက်ခွာခဲ့သည့် ဦးကျော်သူ နှင့် ဇနီး ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်တို့ မေလ ၁ ရက်နေ့တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ ရောက်ရှိပြီဖြစ်သည်။ ဦးကျော်သူ နှင့် ဇနီး ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်တို့ လိုက်ပါလာသည့်လေယာဉ်သည် ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲတွင် ဆိုက်ရောက်ခဲ့ပြီး လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့ရှိ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဌာနခွဲ အဖွဲ့ဝင်များက ဦးကျော်သူ နှင့် ဇနီး ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်တို့ ဓာတ်ပုံပါ အမှတ်တရ တီရှပ်များ ၀တ်ဆင်ကာ သွားရောက်ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။ ညနေ ၅ နာရီခန့်တွင် ဦးကျော်သူ နှင့် ဇနီး ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်တို့အား အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဌာနခွဲ အဖွဲ့ဝင်များက...
နိုင်ငံတကာသာဂိ၊ ဧပြီ ၂၁၊ ၂၀၁၂ နိဒါန်း – နိုင်ငံတကာသတင်းခေါင်းစဉ်တွေ ကောက်နုတ်ချက်ကို မရေးတာကြပြီ။ အခုတော့ ဧပြီ ၁ မြန်မာပြည်ရွေးကောက်ပွဲအပြီး၊ ဧပြီ လလယ် သင်္ကြန်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်အပြီးမှာ မှတ်ထင်ထင်ဖြစ်မိတဲ့ နိုင်ငံတကာသတင်းခေါင်းစဉ်များကို ချရေးလိုက်ပါတယ်။ ရီပတ်ဘလစ်ကန်သမ္မတလောင်းအဖြစ် မစ်ရော်နီ သေချာ ၂၀၁၂ နှစ်ဆန်းကတည်းက အမေရိကန်ပြည်မှာ အတိုက်အခံပါတီကြီး (ရစ်ပတ်ဘလစ်ကန်ပါတီ)ရဲ့ သမ္မတလောင်းရွေးပွဲ ချိမ့်ချိမ့်သဲ စည်ကားခဲ့တယ်။ ရှေးရိုးစွဲတဲ့သဘောထားရှိသူ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေ အပြိုင်အဆိုင် ပါတီဝင်တွေ၊ မဲဆန္ဒရှင်တွေကို အပြိုင်အဆိုင်မဲဆွယ်လိုက်ကြတာမှာ လက်ယာစွဲ အရင်းရှင် မစ်ရော်နီက ခရစ်ယာန်အစွဲသန် ဆန်တိုရမ်နဲ့ သူတင် ကိုယ်တင်ဖြစ်နေရာက ဆန်တိုရမ်က သူ့မိသားစုကိစ္စကြောင့် သမ္မတလောင်း မဲဆွယ်ပွဲကနေ နောက်ဆုတ်လိုက်ပါပြီ။ သည်တော့ လက်ယာအစွန်းရောက် ရစ်ပတ်ဘလစ်ကန်ပါတီကြီးအတွက် အရင်းရှင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ စိတ်ကြိုက်...
မင်္ဂလာဒိုး အနုပညာအင်အားစုမှ ရဲရဲတောက်တေးသံချပ်များ(ဂျပန်) စတင်ဖြန့်ချိ ထွန်းဝေ၊ မိုးမခ၊ ဧပြီ ၄၊ ၂၀၁၂ အကြိမ် ၂၀ မြောက် အစဉ်လာမပျက် ဂျပန်မှ မင်္ဂလာဒိုး အနုပညာအင်အားစုမှ ရဲရဲတောက်တေးသံချပ်များ စတင်ဖြန့်ချိ…. ၂၀၁၂ ခုရဲ့ မြန်မာပြည် သင်္ကြန် အမှီ တင်ဆက်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်နိုင် ရန် အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံရောက် မင်္ဂလာဒိုး အနုပညာအင်အားစု မှ နှစ်စဉ် ကျင်းပနေကြ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ မြန်မာ့ ရိုးရာ သင်္ကြန် ပွဲ များတွင် တင်ဆက်နေကျ ဒိုးပတ်သံ များဖြင့် နိုင်ငံတကာရောက် မြန်မာမိသားစု များနှင့် မြန်မာပြည်တွင်းမှ အောင်ပွဲရ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် ကိုထောက်ခံအားပေးနေသေ မိဘပြည်သူများအတွက် စိတ်သောက ကင်းဝေး နိုင်စေရန်...
စိတ်ဝင်စားမိတဲ့ နိုင်ငံတကာသတင်းခေါင်းစဉ်များ – မတ် ၂၀ နိုင်ငံတကာသာဂိ၊ မတ် ၂၀၊ ၂၀၁၂ ရစ်ပတ်ဘလစ်ကန်ပါတီအတွက် အမေရိကန်သမ္မတလောင်း ပြိုင်ပွဲ ၂၀၁၂ နိုဝင်ဘာမှာ အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမယ်။ ၂၀၁၂ နှစ်မဆန်းခင်ကတည်းက အတိုက်အခံပါတီ ရစ်ပတ်ဘလစ်ကန်က သူတို့ပါတီကိုယ်စားပြုမယ့် သမ္မတလောင်း ရွေးပွဲကို ပြည်နယ်အနှံ့မှာ ကျင်းပနေတယ်။ အာဏာရဒီမိုကရက်ပါတီရဲ့ လက်ရှိသမ္မတ အိုဘားမားကို ယှဉ်ဖို့ အတိုက်အခံရစ်ပတ်ဘလစ်ကန်တွေ အကြိတ်အနယ်ကို မင်းလောင်းရှာနေကြလေရဲ့။ လက်ရှိ မင်းလောင်းရွေးပွဲမှာ ပြိုင်ဖက် ၃ ဦးက မစ်တ်ရော်နီ၊ ဆန်တိုရမ်နဲ့ နယုဂင်းဂရစ် ဖြစ်တယ်။ အကြမ်းအားဖြင့် သူတို့အားသာချက်တွေကို ပြောရရင် မစ်တ်ရော်နီက လုပ်ငန်းရှင်များအကြိုက် အရင်းရှင်မင်းလောင်း၊ ဆန်တိုရမ်က ဘာသာရေးသမားတွေအကြိုက် ရှေးရိုးစွဲမင်းလောင်း၊ နယုဂင်းဂရစ်ကတော့ ခေတ်ပေါ်နိုင်ငံရေးသမားတွေအကြိုက် အပြောကတော့...
စစ်တပ်က ဗိုလ်မှူးချုပ်တဦးကို နိုင်ငံခြားရေးဌာနပို့ပြီး သံအမတ်ကြီးတာဝန်ယူခိုင်း ဓာတ်ပုံသတင်း မတ် ၉၊ ၂၀၁၂ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ဗိုလ်မှူးချုပ်မျိုးမြင့်သန်းအား နိုင်ငံခြားရေးဌာနသို့ လွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပြီးနောက် ထိုအရာရှိ သံအမတ်ကြီးရာထူး ရသွားကြောင်း နိုင်ငံခြားရေး ဌာန ရုံးတွင်းပေးစာတစောင်အရ သိရသည်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
ပြည်ပရောက်မြန်မာများ အလွန်အကျွံ အကောင်းမြင်ခြင်း၊ အဆိုးမြင်ခြင်း မပြုကြဘဲ ဒီမိုကရေစီရေး မလျော့တမ်းဆက်လှုပ်ရှားကြရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၂၊ မတ် ၈၊ ၂၀၁၂ အမေရိကန်ပြည်နှင့် ပြည်ပရောက် မြန်မာများအနေနှင့် လက်ရှိမြန်မာပြည်အရေးကို အကောင်းမြင်လွန်းခြင်းနှင့် အဆိုးမြင်လွန်းခြင်း အစွန်း၂ဖက်မှ လွတ်ကင်းစွာ ရှုမြင်စေလိုကြောင်း၊ ပြည်တွင်းတွင် ပြည်သူတို့က ဒီမုိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားမှုများကို အကောင်းဆုံး အစွမ်းကုန် ကြိုးပမ်းနေသည့်နည်းတူ ပြည်ပရောက် မြန်မာများကလည်း ဆက်လက်ပြီး နိုးကြားတက်ကြွစွာ လှုပ်ရှားကြဖို့ လုိုအပ်ကြောင်း၊ ပြည်ပရောက် မြန်မာပြည်သူတို့၏ အခန်းကဏ္ဍသည်လည်း အရေးပါကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အမှာစကားပြောကြားလိုက်သည်ဟု သိရသည်။ ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာအခြေစိုက် BADA နှင့် BAWA ဟု အမည်တွင်သည့် မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသည့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ပြီး တက်ကြွနိုးကြားလှုပ်ရှားသူ မြန်မာဇနီးမောင်နှံတစုံတို့က...
အောင်ငြိမ်းချမ်း (Myanmar Now) ● မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကို အထွက် တိုးစေမည့် စပါးမျိုးကောင်းမျိုးသန့် https://t.co/fOwvlPT0Fe https://t.co/egJocOUq9l about2hours ago ReplyRetweetFavorite
ကာတွန်း ရာဇာသာစည်ရဲ့ တစစ် စစ်နဲ့ https://t.co/HAqivf5HCO https://t.co/0DN2QoGLrT about 12 hours ago ReplyRetweetFavorite